Mgbe anyị banyere n'ime ngwa Uber anyị, ọ na-akpachapụ anya ebe anyị na-adịbeghị anya. Mgbe anyị gara na ebe nrụọrụ weebụ uwe, anyị na-ahụ ihe ndị atụpụtara sitere na ihe ndị anyị zụtara na mbụ. Mgbe anyị na-agagharị na-ama ụlọikwuu n'ịntanetị, anyị na-eje ozi ngwa ngwa ọkọlọtọ dị mkpa maka ngwa ahịa ahụ. Mgbe anyị mepere Google ma ọ bụ Apple Maps, a na-enye anyị ebe ndị mmadụ na-agakarị na-adabere na oge na ọnọdụ dị ugbu a. Ọ bụ maka ịhazi onwe ya na ihe niile ruo otu ihe -
Gwa ngalaba IT gị ka ọ bụrụ Firefox
Tọzdee, Disemba 4, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Echere m na m na-mara mma emebi n'oge gara aga mgbe ọ na-abịa IT ngalaba. M gbara ọsọ a na netwọk na mbụ m ọrụ na bụ Ihọd na niile ụmụaka na ngalaba (wezụga m Director n'oge ahụ, M mgbe niile zụtara otu maka ya mbụ). Vingkwaga n’etiti ọrụ dị iche iche n’ahịa ahịa na teknụzụ etinyela m n’akụkụ abụọ nke ọnụ ụzọ IT ka m wee mara etu iwe si adighi
Firefox meriri na Nchọgharị Brows
Ileba anya na ahịa na-adịbeghị anya maka ihe nchọgharị na-enye ụfọdụ nghọta banyere onye na-emeri ma na-efufu agha. Firefox gara n’ihu na-ewu ọkụ, Safari na-arị arị elu, na Internet Explorer na-efunahụ ala. Ọ ga-amasị m ịkọwa ihe atọ ndị a na 'trọ' nke ihe na-eme. Internet Explorer Mgbe ebibisị Netscape Navigator, Ntụgharị ghọrọ n'ezie ọkwa ọla edo nke net. Ihe nchọgharị ahụ dị mfe, na-arụ ọrụ, ma tinye ya na ngwaahịa Microsoft niile.